Facebook	Twitter	Barnaamijka Waxbarashada	Subscribe to this RSS feed
Sunday, October 31 2010	Warbixin ku saabsan machad laga furay magaalada badhan oo shareecada Islaamka (DAAWO SAWIRADA)	Written by Yaasiin Cali
Badhan (SPR): Xaflad si wayn loo soo agaasimay ayaa manta lagu qabatay xarunata machadka IQRA'xafladan ayaa waxa looga hadlayay furitaan machadka iqra oo laga furay magaalada badhan, dadkii ka soo qaybgalay xafalada ayaa waxa ka mid ahaa oday dhaqameedyo,mas’uuliin,macalimiin,bahda caafimaadka,ururada…	Tagged under
Read more... Monday, October 18 2010	Hay’ada Dandor oo shahaadooyin gudoonsiisey ardey gaareysa 250 ardey oo xirfado kala duwan kaga qalin jabiyey machadkooda farsamada.	Written by Nimca Muuse
Boosaaso (SPR): Hay’ada Maxaliga ah ee lagu magacaabo Dondor ayaa waxay soo afjartey mashruuc ay ku maalgalisey Hay’ada UNDP oo isla markaasna dadka barakacayaasha ah iyo dadka danyar ah loogu talagalay si ay uga faa’ideystaan.
Hay’ada Dondor ayaa waxay shalay…	Tagged under
Read more... Thursday, September 30 2010	Siminaar Naas Nuujinta oo lagu qabtey machadka OTTI ee Badhan.	Written by Yaasiin Cali Ciise
Badhan (SPR): Siminaar lagu qabtey magaalada Badhan oo ay soo qababan qaabiyeen machadka caafimaadka ee OTTI magaalada Badhan ayaa looga hadlay naas nuujinta iyo waxtarkeeda.
Idaacada Somali Public Radio ayaa waxay wareysi qaas ah la yeelatey madax machadka OTTI…	Tagged under
Read more... Wednesday, September 29 2010	Wareysi:Wakiilka Machadka Farsamada Candlelight ee Ceerigaabo.	Written by Yaasiin Cali Ciise
Ceerigaabo (SPR): Machad farsamada lagu barto oo laga hirgeliyay magaalada Ceergabo oo ay gacanta ku hay'ada Candlelight of Sanaag Region ayaa intii uu furnaa waxa ka qalinjebisay arday gaadhaysa afar boqol oo araday.
Mudane Xassan Cali oo ah wakiiilka hay’ada…	Tagged under
Read more... Friday, September 24 2010	Badhan---- Kulan wacyi galin ah oo ku saabsan Jaamacada Maakhir University.	Written by Yaasiin Cali Ciise
Badhan (SPR): Kulan ay kasoo qayb galeen ururada haween ay ku jira hay'adaha ,bahda waxabarashada, bahda caafimaadka iyo dad aqoon yahano ah ayaa maanta lagu qabaty xarunta ururka haweenka ee Al-Nasar ayaa waxaa lagu lafagurayay sida ugu haboon ee Jaamcada…	Tagged under
Barnaamijka Waxbarashada iyo Todobaadkan 31/07/2010	Most Popular